Qarax Gaari Gaashaaman Lagu Gubay Oo Sh/dhexe Ka Dhacay. – Bogga Calamada.com
Qarax Gaari Gaashaaman Lagu Gubay Oo Sh/dhexe Ka Dhacay.
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobalka Shabeelada dhexe waxey sheegayaan in duleedka degmadaasi uu ka dhacay qarax culus kaasi oo faahfaahin dheeraad ah laga helayo.
Qaraxan oo loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta gaar ahaan kuwa Burundi oo ku socdaalayay duleedka degmdaasi.
Qaraxa oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlay deegaano badan oo dhaca duleedka degmada Balcad ayaa haleelay gaari Taw ah oo qeyb ka ah gaadiidkii ay wateen kolanyada gaalada ah ee qaraxa lagula beegsaday duleedka degmadaasi.
Wararkii ugu dambeeyay waxey xaqiijinayaan in Miinada ay burburisay gaariga Taw-ga ah sidoo kale qaraxa waxaa baqti iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan kuwa Burundi kuwaasi oo la socday gaariga qaraxa lagu burburiyay.
Wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Jowhar ee Wilaayada Shabeelada dhexe waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro isugu jira Kamaa’in iyo qaraxyo kuwaasi oo ciidamada shisheeyaha iyo maleeshiyaatka Murtadiinta ay ku waayeen saraakiil,askar iyo gaadiid dagaal.